"Ukuhamba" kunentsingiselo eyahlukileyo | Sansan
Wonke umntu, "ukuhamba" kunentsingiselo eyahlukileyo. Kubantwana abangakhathaliyo, abahambayo banokutya isidlo sasemini esimnandi umama ehleli ngaphandle nothando, kwaye banokudlala ngolonwabo nabahlobo, yeyona nto imnandi kakhulu. Kubo, intsingiselo yokuhamba kunokuba "ukudlala" kunye "nokutya"! Ulutsha olunothando okokuqala, uhambo lunokutsalwa unxibe iyunifomu, unxibe iimpahla zangaphantsi kwaye uhlala kwibhasi enye abakhenkethi nabantu obathandayo. Ngabo ngelo xesha, intsingiselo yokuhamba "ukunxiba" kunye "nothando"; Kubantu abancinci abasanda kungena kuluntu kwaye bagcwele umoya wokulwa, ukuhamba yinto ehlala ijabulisa. Iintliziyo zabo zizele ngumdlandla, kwaye abalindi ukuba bazi izinto ezintle ezizayo. Yintoni enye into efanelekile ukuba bayingcamle kwaye bayifunde. Okwangoku, intsingiselo yokuhamba kudala yahlukaniswe "ukudlala" kunye "nothando nothando"
, Kodwa inentsingiselo enzulu. Kwabakhulileyo abanamava obomi, "ukuhamba" kudala kuphele isizathu. Ngokungafaniyo nabantwana abahamba bayonwaba, abafuni abantu abancinci ukuba basukele ngokungabinako. Bafuna nje ukubona le intle. Emhlabeni, ndifuna ukuchitha ixesha elininzi nosapho lwam kwaye ndishiye iinkumbulo ezintle kobu bomi bufutshane.
Xa usiya, uza kubona iintyatyambo nezityalo ezingafaniyo, iintaka ezinqabileyo kunye nezilo ongazange weva ngazo, izinto zentlalo ongazange wazibona ... Uya kufumanisa ukuba ukuhamba kunomdla kakhulu. Ungaziva ngathi ubomi abukho lula kolu hambo, wazi indlela yokuxabisa ukukhula kwezityalo ematyeni, iqokobhe lentaka eliqhekekileyo, inguqu yecicada… Iziganeko ezahlukeneyo ezimangalisayo, ezinye izinto azinakufundwa encwadini , ufuna uFumaneke kwinyani. Ukubamba lo mzuzu umnandi, sebenzisa amehlo akho ukurekhoda, ukufumana. Ukuhamba luhlobo lokuphumla ngokweemvakalelo. Ukujonga isibhakabhaka esiluhlaza kunye nengca enkulu, uya kuziva uhlaziyekile, kwaye imo yakho iya kuziva ingcono. Umhlaba mkhulu, kwaye uyonwabela wedwa. Vumela umoya wakho ubhabhe, kwaye umoya omtsha mawukujikele. Unokulala ngoxolo kwaye kamnandi kwiphupha lokuthula. Kwiphupha elimnandi: ivumba lengca libonakala linencindi yobumnandi.
Ukubaluleka kokuhamba kukuba unokufumana eyona ntsingiselo yobomi, ungongeza ulwazi lwakho, ungafumana izinto ezininzi ezinomdla, ungazenza ulibale kwaye uhlaziyeke